Activities | Network for Chin Community Development
History of Chin
Chin Culture Videos
1.Village need assessment.
2. Village meetings.
3. Addressing the process of decision making within the village/circle.(Bylaw)
4. Development projects are village micro credit projects created. Pig Farming project. Rice bank project. Shop project.
5. Project committee election by secret voting system.
6. Community Development Training
7.Women Empowerment Program.
8. Networking projects.
9. Mobilizing awareness.
10. Projects Monitoring.
11. Community Development Dialogue
ဇိုမီး နေ.စဉ်သတင်းများ ( Tongsan daily news)
ဇိုမီး နေ.စဉ်သတင်းများ ( Vaphual news daily)
ဇိုမီး နေ.စဉ်သတင်းများ ( Zomi daily news)
လွတ်လပ်တဲ့ အာရှသံ (RFA news)
BBC News of Burma.
Irrawaddy news magazine, Burma
VOA news of Burma
Click to Download Zawgyi Burmese font
Lai Mi songs
Love songs Burma
Mizo songs(Pathian hla)
Chinland Issue video
YPS ကတ်စနစ်စတင်မိတ်ဆက်၊ ၆ လအတွင်း အများပြည်သူ အသုံးပြုနိုင်မည် January 16, 2019
YBS ဘတ်စ်ကားယာဉ်လိုင်းတွေမှာအသုံးမယ့် YPS ကတ်စနစ်ကို ကုမ္ပဏီက ဒီကနေ့ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီး လာမယ့် ခြောက်လအတွင်း အများပြည်သူ[...]
ကွန်ဟိန်းမြို့တွင် ကျပ်သိန်းပေါင်း တသိန်းခွဲ တန်ဖိုးရှိ အိုက်စ်မူးယစ်ဆေးများ ဖမ်းဆီးရမိ January 16, 2019
ရှမ်းပြည်နယ် ကွန်ဟိန်းမြို့မှာ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၅၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေ ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ မူယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနက[...] […]
မောင်​​တောမြောက်​ပိုင်းတွင် လက်​နက်​ကြီးကျပြီး လူငယ် ၂ ဦးဒဏ်ရာရ January 16, 2019
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်​​တောမြို့နယ်​​မြောက်​ပိုင်း ရန်​​အောင်​မြင်​​ကျေးရွာမှာ ဒီနေ့ နေ့လယ်ပိုင်း က လက်​နက်​ကြီးကျပြီး ​နေအိမ်​တလုံး မီး​လောင်ကာ ဒိုင်း​နက်​လူမျိုး​[...] […]
ကျွမ်းဘားမယ်ရဲ့ အမှတ်ပြည့်စွမ်းဆောင်ရည် January 16, 2019
အမေရိကန်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Anaheim မြို့မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၂ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Collegiate Challenge ကျွမ်းဘားပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာတော့ UCLA ကျောင်းသူ Katelyn Ohashi ဟာ (၁၀)မှတ်အပြည့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အခုလို ထူးချွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပြင် ပရိတ်သတ်ကို သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ဖျော်ဖြေကပြဟန်ကလည်း အထူးစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတာကြောင့် ဒီဗီဒီယိုဟာ အင်တာနက်မှာ ကြည့်ရှုအကြိမ်အရေ […]
ကျန်းမာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (အပိုင်း - ၁) January 16, 2019
ဇန်နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၉ - ကျန်းမာရေးစနစ်အပေါ် ဘယ်လိုကြောင့် ယုံကြည်မှုတွေ ကျဆင်းလာပြီး၊ ယုံကြည်မှု ပြန်တက်လာအောင် ဘာတွေကို အဓိက ပြုပြင်ပေးဖို့ လိုနေပါလဲ။ […]
ရခိုင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ၆၀၀၀ အထိ တိုးလာ January 16, 2019
တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင်လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA တို့ကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရ တဲ့ ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ဟာ ၆၀၀၀ ထိ ရှိလာ နေပြီလို့ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ICRCနဲ့ ရခိုင်အနှံ့မှာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေတဲ့ ဝံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့က အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ […]
စနေနေ့ည တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း အစီအစဉ် January 16, 2019
မကြာသေးခင်က ကချင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းလည်းဖြစ်၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအရ သြဇာအရှိန်အ၀ါလည်းကြီးတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်အထိ အရေးကြီးလာနေပါပြီလဲ၊ အနောက်နိုင်ငံတွေထက် ပိုပြီးဦးစားပေး ဆက်ဆံဖို့ လိုနြေ […]
noreply@voanews.com (ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း))
SNLD က ကန့်ကွက်ထားတဲ့ NLD ပါတီ ရှမ်းတိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ကိစ္စ ရွေးကော်မှာ စစ်ဆေး
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရထားတဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးစိုင်းပန်းဆိုင်ကို ကျားခေါင်းပါတီ က ကန့်ကွက်ထားတာကို ဒီကနေ့ နေပြည်တော်က ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ ဒုတိယအကြိမ် ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ […]
စည်းကမ်းမဲ့ မြစ်သဲကျောက် ထုတ်လုပ်မှု အရေးယူပေးဖို့ ရေလုပ်သား ၃၀၀ ကျော်ဆန္ဒပြ
စည်းကမ်းမဲ့ မြစ်သဲကျောက်တွေ တရားလွန်ထုတ်လုပ်နေမှုကြောင့် ပြည် ပန်းတောင်း၊ ရွှေတောင်မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာ ၁၀ ရွာလောက်က ဒေသခံတွေ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက် အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့ ဒီနေ့ ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ ရေလုပ်သား ၃၀၀ လောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ […]
ဒြပ်မဲ့ပုံတူ January 25, 2014
သံသရာလမ်းက ဝေးသထက်ဝေး...ဝေးကွာနေမယ် ခန္ဓာစမ်းက သွေးထွက်နှေး...နှေးလာနေတယ် အလေးထားကိုးစားလျှက်ရည်မှန်းထားတဲ့ ကိုယ်မှန်ဝါဒလည်း အားပြတ်ပြီး ပြိုကျပျက်မတတ်မှာတော့ သွေးသားအရိုးများဖွဲ့တည်ယန္တယားရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကပဲ အသားဖြတ်ပြီး မျိုချခဲ့ရတာပေါ့ လေအား လျော့ လျော့လာတဲ့ ဘော်လုံးကို ဆက်ကန်ခဲ့တယ်... ဓမ္မစစ်အမြင်ရဲ့ အယူအဆများနဲ့ အတွေးအခေါ်သောက်ရေချိုဟာ လွင့်ခြောက်သွေ့ပြီး ပျက် […]
ယေဘူယျလမ်း January 25, 2014
ကျနော့် မိန်းမ မီးဖွားရမယ် ဆေးရုံကို ဘယ်လမ်းက သွားလဲ ဒီလမ်းကသွား... ယေဘူယျ လမ်းလို့ ခေါ်တယ်ကျနော့် အမေ အသုဘ ချရမယ် သုသာန်ကို ဘယ်လမ်းက သွားလဲ ဒီလမ်းကသွား... ယျေဘူယျ လမ်းလို့ ခေါ်တယ်ဟာ... ဒါက ဆေးရုံသွားတဲ့လမ်းကြီးလေ မှားနေပြီ... မမှားပါဘူး... သုသာန်ဘေးမှာ ဆေးရုံ လာဆောက်ထားတာလား ဆေးရုံဘေးမှာ သုသာန် လာဆောက်ထားတာလား ဘယ်လူသားမှ သေချာ မကွဲပြားပေမယ့် ဆေးရုံဘေးမှာ သုသ […]